Martin Keown Oo Saadaaliyay Kooxda Guulaysan Doonta Man United & Arsenal | Raadgoob
Martin Keown Oo Saadaaliyay Kooxda Guulaysan Doonta Man United & Arsenal
Arsenal ayaa Emirates Stadium ku soo dhawayn doonta Manchester United waana kulan saamayn wayn ku yeelan kara miiska kala saraynta Premier Leaque iyo waliba loolanka adag ee loogu jiro koobka Premier Leaque. Jose Mourinho iyo Arsene Wenger oo hore isku soo eeday ayaa markale iskaga hor iman doona kulan Premier Leaque ah iyada oo labada kooxoodba uu kulankani u noqon doono mid aad muhiim u ah.
Laakiin halyaygii hore ee Arsenal ee Martin Keown oo qayb ka ahaa kooxdii taariikhda Premier Leaque baalka dahabka ah ka gashay ee guuldarada la’aanta koobka horyaalka Ingiriiska Gunners ugu qaaday ayaa saadaaliyay kooxda guulaysan doonta kulanka Emirates Stadium.
Maqaal uu ku qoray wargayska Daily Mail ayuu Martin Keown ku sheegay in sababa jira awgeed ay Gunners garaaci doonto kooxda Jose Mourinho ee Man United. Martin Keown ayaa saadaaliyay in kooxdiisii hore ee Gunners ay 2-1 ku garaaci doonto Man United isaga oo xusay in guushii ay Tottenham ka gaadheen ay dareenkooda badashay.
Martin Keown oo ka hadlaya kulanka Arsenal iyo Man United ayaa yidhi: “Waligeed wax sahlan ma aha in aad ka hortimaado Man United laakiin anigu waxaan ku tagayaa in 2-1 ah Arsenal ku guulaysan doonto.Guushii Tottenham ayaa Arsenal dareen fiican siisay isla markaana guushu waxay hal dhibic u jirsiin doontaa Uited”.
Laakiin Arsene Wenger ayaa aaminsan in Jose Mourinho aanu baska baakiman doonin oo aanu difaac buuxa gali doonin kulanka Emirates Stadium wuxuuna yidhi: “Anigu ma filayo wax khaas ah, kaliya anigu waxaan filayaa in aanu diyaar u noqono oo aanu hadda soo kabsano. Man United waa koox xoogan isla markaana waxaan rajaynayaa in aanu la tacaali doono dhibaatada ay nasiin doonaan, sidoo kale weerar ayaa qaadi doonaan, iyagu kaliya ma difaacan doonaan”.